Ngemva Service - Qingdao Xindacheng Plastic Machinery Co., Ltd
Inkampani yethu sizonikeza ulwazi olufanele kubuchwepheshe ehlukahlukene ibhizinisi baxoxisana amakhasimende. Uma amaklayenti ufuna ukuvakashela inkampani yethu, njengembuyiselo sizonikela konke abakudingayo ukuze kube lula.
Ngemva kokungena ngemvume inkontileka, inkampani ukwakha groundsill ukufakwa ishadi okokomela amanzi, ugesi kanye negesi of imishini Esekela ku isimo sangempela nezimfuneko amakhasimende 'futhi inikeza imininingwane uhlu oda nomkhiqizi afanayo ukuze uthole inkomba kwamakhasimende.
Ngemva imishini ukufika, isevisi yethu izisebenzi izofika ngo-locale posted for ukufakwa, ukulungisa iphutha, ukuqeqeshwa kobuchwepheshe kuze amakhasimende ongasebenza ngokuzimela futhi silwenza umkhiqizo abafanelekile. Izikhungo izisebenzi kufanele ufike esikhumulweni nezici zakhona yekhasimende ngesikhathi lapho sinikeza inkonzo iklayenti futhi.
Noma yimuphi umqondo omuhle noma isiphakamiso mayelana inkampani yethu nanela. Sizoxhumana nawe ngokushesha uma kukhona izidingo.